Rindrambaiko fanamarihana laser EZCAD, Controller, lohan'ny scanner Galvo - JCZ
Rindrambaiko amin'ny laser
Rindrambaiko fanontana 3D
Controller fanontana 3D
Scanner 2D Galvo - GO7
Scanner 2D Galvo - GO7S
Scanner 3D Galvo - GO3D-T
Raycus - Hery ambany ambany
Raycus - Hery mahery vaika
Laser Laser Raycus
Raycus - Modely tokana CW
Raycus - Module Multi CW
JPT UV - Fanamafisana rano
JPT UV - Fangatahana rivotra mangatsiaka
Huaray UV - Fangatsiahana rano amin'ny rano polar
DAVI - Laser diode CO2
Inngu Green Grace X Series - Fangatsiahana rivotra / rano
Inngu Green Pulse Series - Fangatsiahana rivotra / rano
Huaray Green Polar - Fangatsiahana rano
Laser Laser Hosay Picosecond
Laser Laser Picosecond INNGU
Laser amin'ny femtosecond
F-theta Lens - Sasa fisaka
Masinina fanapahana resista
Masinina fanoratana 5 Axis
Masinina tamin'ny laser OEM / ODM
Hadisoana amin'ny lozisialy
ezcad2 sy ezcad3 dia lozisialy marobe amin'ny karazana fanodinana laser miaraka amin'ny scanner laser galvo. mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny karazana laser sy galvo eny an-tsena ary mora be ny miasa.
Ny fifehezana laser LMC sy DLC2 dia miasa miaraka amin'ny rindrambaiko ezcad, afaka mifehy ny ankamaroan'ny karazana laser (FIBER, CO2, UV, Green ...) ary ny scanner galvo (XY2-100, sl2-100 ...) eny an-tsena.
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879879 ''
Manome endrika sy famokarana optika amin'ny endriny feno toy ny solomaso fitiliana F-theta izahay, expander andry, ary solomaso mifantoka amin'ny karazana fonosana sy fitaovana isan-karazany.
Izahay dia mitondra loharano laser azo antoka indrindra, izay natao tany Sina na firenena hafa miaraka amina singa hafa ho fonosana laser, miaraka amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
Izahay dia mamokatra milina fanodinana laser ho an'ny welding, fanapahana, famonoana resistor, fametahana ... milina mahazatra sy namboarina ihany koa.
Kalitao, fahombiazana, mahomby ary serivisy.
16 taona niainany tamin'ny sehatry ny laser, JCZ tsy vitan'ny orinasa iray manerantany mamolavola sy manamboatra vokatra fanaraha-maso laser sy famoahana vokatra mifandraika amin'izany fa mpamatsy azo itokisana koa ho an'ny faritra sy fitaovana samihafa mifandraika amin'ny laser novolavolaina sy novokariny irery, ambany, mitazona, orinasa mpamatsy vola sy mpiara-miasa stratejika.
Scanner an'ny Laser Galvo
Rindrambaiko tamin'ny laser EZCAD2 dia natomboka tamin'ny taona 2004, taona nananganana an'i JCZ. Taorian'ny fanatsarana ny 16 taona, ankehitriny dia eo amin'ny toerana lohalaharana amin'ny indostrian'ny fanamarihana laser izy io, miaraka amina asany matanjaka sy filaminana tsara. Izy io dia miasa miaraka amin'ny mpanara-maso laser an'ny LMC. Any Chine, maherin'ny 90% ny milina fanamarihana laser miaraka amin'ny EZCAD2, ary any ivelany, ny anjarany amin'ny tsena dia mitombo haingana be. Tsindrio raha hijery antsipiriany bebe kokoa momba ny EZCAD2.
Ny rindrambaiko laser EZCAD3 dia natomboka tamin'ny 2015, nandova ny ankamaroan'ny fiasa sy ny mampiavaka ny Ezcad2. Izy io dia miaraka amin'ny rindrambaiko mandroso (toy ny kernel rindrambaiko 64 sy ny asan'ny 3D) ary ny fifehezana laser (mifanaraka amin'ny karazana teknika laser sy scanner galvo). Ny injenieran'i JCZ dia mifantoka amin'ny EZCAD3 izao, ato ho ato, hanolo ny EZCAD2 izy io ho lasa iray amin'ireo rindrambaiko malaza indrindra amin'ny fikarakarana laser galvo toy ny fanamarihana laser 2D sy 3D, laser welding, fanapahana laser, fandavahana laser ...
Ny vahaolana rindrambaiko fanontana laser JCZ 3D dia misy ho an'ny SLA, SLS, SLM, ary karazana prototyping laser 3D ho an'ny SLA, manana rindrambaiko namboarina antsoina hoe JCZ-3DP-SLA izahay. Misy tranomboky rindrambaiko sy kaody loharanom-pahalalana an'ny JCZ-3DP-SLA. Ho an'ny SLS sy SLM, ny tranokala rindrambaiko fanontana 3D dia azo alaina ho an'ny integrators rafitra hampivelatra ny rindrambaiko fanontana 3D azy ireo.
EZCAD rindrambaiko fampandrosoana kit / API ho an'ny EZCAD2 sy EZCAD3 dia misy izao, Ny ankamaroan'ny asan'ny EZCAD2 sy EZCAD3 dia nosokafana ho an'ny mpampitohy ny rafitra mba handrindrana rindrambaiko tokana ho an'ny rindranasa manokana iray, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana.
Masinina fanoratana laser
Laser Resistor Triring Machine atTS4410F-C50
Beijing JCZ Technology Co., Ltd, fantatra amin'ny anarana hoe JCZ dia natsangana tamin'ny 2004. Orinasa teknolojia avo lenta izy io, natokana ho an'ny fandefasana laser sy hifehezana ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fampidirana. Ankoatry ny vokatra fototra an'ny rafitra fanaraha-maso laser EZCAD, izay eo amin'ny toerana voalohany eo amin'ny tsena na any Shina na any ivelany, dia mamokatra sy mizara vokatra mifandraika amin'ny laser sy vahaolana ho an'ny rafitra laser manerantany toa ny rindrambaiko laser, laser Controller, laser galvo i JCZ. scanner, loharano laser, optika laser…
Hatramin'ny taona 2019 dia manana mpikambana 178 izahay, ary maherin'ny 80% amin'izy ireo dia teknisianina za-draharaha miasa ao amin'ny sampana R&D sy sampana fanohanana ara-teknika, manome vokatra azo antoka ary fanohanana ara-teknika mamaly.
Kalitao avo Serivisy tokana Vidiny mifaninana
Ny vokatra rehetra novokarin'ny JCZ na ny mpiara-miasa aminy dia voamarin'ny injenieran'ny R&D JCZ ary nojeren'ny mpanara-maso hentitra mba hahazoana antoka fa ny kilema rehetra tonga tamin'ny tranokalan'ny mpanjifa dia misy kilema aotra.
SERVICE IRAY MIASA IRAY
Maherin'ny antsasaky ny mpiasa ao amin'ny JCZ no miasa amin'ny R&D sy injenieran'ny teknika mpanohana manohana feno ny mpanjifa manerantany. Manomboka amin'ny 8:00 maraina ka hatramin'ny 11:00 alina, manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy, dia misy ny injenieranao mpanohana manokana.
PRICE fonosana mifaninana
JCZ dia tompon'andraikitra na mpiara-miasa stratejika amin'ireo mpamatsy azy lehibe. Izany no antony ananantsika ny vidiny manokana ary ny vidiny ihany koa dia azo ahena raha toa ka mividy fonosana ny mpanjifa.
Fanamarihana momba ny fialantsasatra nasionaly ao Shina ...
Ahoana ny fanatsarana ny EZCAD2 amin'ny EZCAD3
Laser Manufature News niditra an-tsehatra JCZ Che ...
World Laser an'ny Photonics China 2020
Phone: + 86-01-64426993 + 86-01-64426995
Email: Tsindrio raha hametraka hafatra.
Foiben-toerana: tranobe # 22, # 13 Mintai Road, Distrikan'i Shunyi, Tanànan'i Beijing, Sina, 101300.
Main Factory: M3 Building, No.1 East Road of Jiuxianqiao, Chaoyang District, Beijing City, China, 100016.
© 2004-2020 Beijing JCZ Technology Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.